As of Sat, 08 Aug, 2020 12:00
संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानी तेल आयातकर्तामाथि तेल खरिद नगर्न दिएको कडा चेतावनीपछि विश्वमै कच्चा तेलको बजारमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । विज्ञहरूले कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् ।
संस्थागत उद्देश्य प्राप्तिका लागि संगठनको सिद्धान्त र यसको व्यावहारिक प्रयोगको आवश्यकता रहन्छ । वास्तवमा यसले संगठन संरचना, कार्य सम्पादन स्तर, समूह र समूहमा आबद्ध व्यक्तिहरूको व्यवहारको अध्ययन गरेको हुन्छ ।
तरलता अभावका कारण र समाधान
नेपाली बैंकिङ प्रणालीको विगत डेढ दशकको विश्लेषण गर्दा तरलता बढी र तरलता अभाव (लगानीयोग्य रकमको अभाव) नियमित बहसको विषय बन्दै आएको छ । कहिले अधिक तरलता भई वाणिज्य बैंकहरूले ७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिन ग्राहकलाई अनुरोध गर्छन् । त्यसविपरीत कहिले १५ प्रतिशत ब्याजमा पनि ऋण दिन नसक्ने बाध्यता प्रकट गर्छन् ।
विकासमा छिमेकी मुलुक र नेपाल
चीन र भारत विश्व परिवेशका उदाउँदा शक्ति हुन् । सिमानाको रक्षा तथा नेपालको सार्वभौमिकता अस्तित्वका लागि बोलिएका ती वाक्यांश वर्तमान चिप्स युगका पनि आर्दश वाक्य बनेका छन् । वर्तमान विश्व परिवेशको युद्ध हातहतियारको नभई आर्थिक समृद्धिका निम्ति रहेको छ । सबै मुलुक समृद्ध, सक्षम बन्ने होडमा छन् ।
समुद्री सतहदेखि औसत १४ सय मिटरको उचाइमा रहेको काठमाडौं हावापानीको दृष्टिकोेणबाट विश्वकै उत्कृष्ट सहरमध्ये एक मानिन्छ । माल पाएर चाल पाउन नसकिरहेका हामी, प्रकृतिले निर्माण गरिदिएको यति सुन्दर उपत्यको सही उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौ । साँच्चै भन्नु पर्दा बाग्मतीमा पानी होइन, ढलको फोहर बगिरहेको छ ।
नेपालमा करिब ६२ वटा लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा लघुकर्जा र बचतका लागि खुलेका सहकारीहरू अझ धेरै छन् । यी लघुवित्त संस्थाहरूमा करिब ३० लाख व्यक्ति आबद्ध छन् । करिब ६ खर्ब ५३ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अनुमान छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा अवाञ्छित आलटाल
हालसालै हाम्रा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट नेपालको स्वागतद्वारका रूपमा काठमाडौँमा रहेको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो भौतिक चापका कारण वैकल्पिक विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अनेक थरीका टीका–टिप्पणी र आलोचनाहरू व्यापक रूपमा आइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलगायत वातावरणविद्, देश–विदेशमा रहेका विज्ञ बुद्धिजीवीहरूबीच मत–मतान्तर दैनन्दिन चर्किंदै गइरहेको प्रस्टै छ ।
सरकारी घरमा बस्ने इच्छा अधुरै
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२, बेलासपुरस्थित चिडिमार बस्तीकी उजागर रैदासको सरकारी घरमा बस्ने सपना यस वर्ष पनि पूरा नहुने भएको छ ।
सस्तो र सुरक्षित तातो
हिउँदमा घर वा कोठालाई तातो बनाउनुपर्ने बाध्यता पर्छ । यस लेखमा मितव्ययी ढंगले तातो बनाउने तरिकाबारे चर्चा गरिएको छ । साथै तातो सिर्जना गर्दा हुने अदृश्य हानिहरूका बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ ।
नेपाल आत्मनिर्भर कहिले ?
सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा व्यापारघाटा कम गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । त्यस्तै दुवै छिमेकी देशमा नेपाली उत्पादनको निकासीमा समस्या नहुने बताइँदै आएको छ । सरकारका तर्फबाट स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गरेर विद्यमान उच्चस्तरको व्यापारघाटा तथा बेरोजगारी न्यून गर्दै लग्ने भनिन्छ । रुग्ण उद्योगको पुनःस्थापना र अन्य उद्योगलाई द्रुत सञ्चालनको लागि बेलाबेलामा कुरा उठ्दै आएको देखिन्छ, तर कार्यान्वयन कदम कहिले पनि चालिएको देखिँदैन ।
अख्तियारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक
राज्यमा मौलाउँदो बेथिति र अस्तव्यस्त संरचनालाई लिकमा ल्याउन अख्तियार दुरुययोग अनुसन्धान आयोग(अदुअआ)को सक्रियताबाट मात्रै सरकारको साख उच्च बनाउन योगदान पुग्नेछ । सरकारको प्राथमिकतमा अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारको बिगबिगीलाई ठेगान लगाउने, सदाचार र कानुनी अरिंगालले चिल्ने अभियानलगायत पर्नुपर्छ ।
पूर्वीय दर्शनमा नेपाली संस्कार र अर्थतन्त्र
जीवन र जगत्सम्बन्धी सत्य तथा सामाजिक चेतनाको रूप वा सामाजिक उपयोगितामा आधारित मूल्यको खोज नै दर्शन हो । कौटिल्यद्वारा आन्विक्षिकीलाई विद्याका बलाबल पक्षलाई युक्तिपूर्वक विवेचना गरी लोकको उपकार गर्ने, बुद्धिलाई सुख र दुःखबाट माथि उठाई स्थिर बनाउने र प्रज्ञालाई चिन्तन मननका निम्ति सक्षम बनाउने विद्या भनी चिनाएको छ ।
वि.सं. २००७ मा नेपाली भाषामा पहिलो पटक ‘सत्यहरिश्चन्द्र’ नामक चलचित्र निर्माण भयो, जुन २००८ मा भारतको कलकत्तामा प्रदर्शन भएको थियो । २०२१ सालमा बनेको चलचित्र आमा नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र थियो जुन सरकार आफंैले निर्माण गरेको थियो । निजी क्षेत्रबाट त्यसको एक वर्षपछि ‘माइतीघर’ नामक चलचित्र बनेको इतिहास छ ।
सुनको खोजीमा बालुवा चाल्दै
मलावीको नाथेन्जेमा चार महिना मात्र भयो स्थानीयवासीले सुनको खोजी गर्न थालेको, तर जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने लालशामा मलावीका अन्य ठाउँमा सुनको खोजी गर्ने हजारौंले जताततै माटो खनेको, पन्छाएको र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सारेको वर्षौं भइसक्यो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा र ग्राहकको वित्तीय अनुशासन
देशमा समग्र अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न सरकारले बेलाबेलामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू र सोह अनुसारका नीतिनियमहरू तय गरी कार्यान्वयन पनि गराइरहेको छ, तर यहाँको जीवनस्तर भने उस्ताको उस्तै छ । शिक्षितवर्ग विदेश पलायन हुने र अन्यवर्गमा बेरोजगारी मुख्य समस्या रहन गयो ।